မိသားစုနဲ့ ကွဲကွာသွားပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေရတဲ့အပေါ် လက်ရှိခံစားချက်ကို ပြောလာတဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ် – Askstyle
မိသားစုနဲ့ ကွဲကွာသွားပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေရတဲ့အပေါ် လက်ရှိခံစားချက်ကို ပြောလာတဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ်
ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ်ဟာ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာ ရယူထားနိုင်သူပါ….ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ ပိုင်နိုင်အဆင်ပြေစွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ်ဟာ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…. သူ့ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ တရားဝင် လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ သတင်းကို ကြားရတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်…
တရားဝင်လမ်းခွဲခဲ့ပြီး တစ်ယောက်တည်းနေနေရတဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ်ဟာ ခုလို ဘဝလေးကို နေသားကျနေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့က ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် အောင်ဇော်မင်းရဲ့ သားလေး ရက်လည်ကို လာရင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်….လူပျိုဘဝဟာ ရခဲတာဖြစ်ပြီးတော့ ကံဇာတာတက်လာလို့သာ ခုလိုရသွားတာဆိုတဲ့အကြောင်း…သူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်ထောင်မပြုဖို့ ပြောခဲ့ဖူးပြီး အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ နောင်တရမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း …လူပျိုဘဝက လုံးဝလွတ်လပ်တယ်လို့ သူကရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် သူက အချစ်ရေးကို ခေါင်းထဲက ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး စက်ဘီးတွေဘာတွေကို လည်း အချိန်မရွေးဘဲ ညသန်းခေါင်စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ထွက်စီးချင်ထွက်စီးလို့ ရသွားတဲ့အကြောင်း …ကိုယ်ထွက်ချင်ထွက်လို့ ရပြီး မထွက်ချင်မထွက်လို့ရပြီး အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ကျန်တဲ့ အခက်အခဲတွေ သိပ်မရှိဘဲ နေသားကြနေပါပြီလို့လည်း သူကဆိုခဲ့ပါတယ်….
နောက်ပြီး အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗေဒင်လည်း မမေးချင်တော့ဘဲ ဘဝကို ကြိုမသိချင်တော့တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပျော်သလိုသာနေပြီးတော့ အိမ်ထောင်ထပ်ပြုမပြုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပျော်ရမယ်ဆိုရင် ထပ်ပြုရင်လည်း ပြုမှာပေါ့လို့ ဆိုကာ မပျော်ဘူးထင်ရင်လည်း မပြုတော့ဘူးလို့ ကျော်ဇင်ထွဋ်က ဆိုခဲ့ပါတယ်….
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လက လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ်တို့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ခုဆိုရင် တစ်နှစ်ခွဲခန့် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်….. သမီးလေး ၂ ယောက်ရှိမှ ကွဲကွာခဲ့ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ……
ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္ဟာ အႏုပညာေလာကမွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရယူထားႏိုင္သူပါ….က်ရာဇာတ္႐ုပ္မွာ ပိုင္ႏိုင္အဆင္ေျပစြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္ဟာ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္…. သူ႔ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူနဲ႔ တရားဝင္ လမ္းခြဲခဲ့တဲ့ သတင္းကို ၾကားရတဲ့ ပရိသတ္ေတြကလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္…
တရားဝင္လမ္းခြဲခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းေနေနရတဲ့ ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္ဟာ ခုလို ဘဝေလးကို ေနသားက်ေနတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ေဇာ္မင္းရဲ႕ သားေလး ရက္လည္ကို လာရင္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္….လူပ်ိဳဘဝဟာ ရခဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကံဇာတာတက္လာလို႔သာ ခုလိုရသြားတာဆိုတဲ့အေၾကာင္း…သူငယ္ခ်င္းေတြကို အိမ္ေထာင္မျပဳဖို႔ ေျပာခဲ့ဖူးၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးမွ ေနာင္တရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္း …လူပ်ိဳဘဝက လုံးဝလြတ္လပ္တယ္လို႔ သူကရင္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္…
ဒါ့အျပင္ သူက အခ်စ္ေရးကို ေခါင္းထဲက ထုတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး စက္ဘီးေတြဘာေတြကို လည္း အခ်ိန္မေ႐ြးဘဲ ညသန္းေခါင္စိတ္ကူးေပါက္ၿပီး ထြက္စီးခ်င္ထြက္စီးလို႔ ရသြားတဲ့အေၾကာင္း …ကိုယ္ထြက္ခ်င္ထြက္လို႔ ရၿပီး မထြက္ခ်င္မထြက္လို႔ရၿပီး အဆင္ေျပတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ က်န္တဲ့ အခက္အခဲေတြ သိပ္မရွိဘဲ ေနသားၾကေနပါၿပီလို႔လည္း သူကဆိုခဲ့ပါတယ္….
ေနာက္ၿပီး အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဗဒင္လည္း မေမးခ်င္ေတာ့ဘဲ ဘဝကို ႀကိဳမသိခ်င္ေတာ့တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ေပ်ာ္သလိုသာေနၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္ထပ္ျပဳမျပဳကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေပ်ာ္ရမယ္ဆိုရင္ ထပ္ျပဳရင္လည္း ျပဳမွာေပါ့လို႔ ဆိုကာ မေပ်ာ္ဘူးထင္ရင္လည္း မျပဳေတာ့ဘူးလို႔ ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္က ဆိုခဲ့ပါတယ္….
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လက လမ္းခြဲခဲ့တဲ့ ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္တို႔ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ခုဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန႔္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္….. သမီးေလး ၂ ေယာက္ရွိမွ ကြဲကြာခဲ့ရတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပရိသတ္ေတြက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ……